बच्चालाई क्याल्सियम पुगेको छ कि छैन ? कसरी थाहा पाउने ? – aajnepal
HomeHealthबच्चालाई क्याल्सियम पुगेको छ कि छैन ? कसरी थाहा पाउने ?
बच्चालाई क्याल्सियम पुगेको छ कि छैन ? कसरी थाहा पाउने ?
February 5, 2019 aajnepal Health 0
हाडजोर्नीको विकास र मजबुतीका लागि मान्छेलाई उमेरअनुसार क्याल्सियम जरुरत पर्छ । बढ्दो उमेरका बच्चालाई त क्याल्सियम झनै आवश्यक पर्छ ।
यो उमेरमा क्याल्सियम अभाव भयो भने विभिन्न समस्या निम्तिन सक्छ । हाडजोर्नी विशेषज्ञ प्रा.डा. गणेश गुरुङले हलक्क बढ्दै गरेका बच्चामा क्याल्सियम कम हुँदा निम्तिने समस्याबारे सजग गराएका छन्
शारीरिक विकासको क्रममा बच्चाको हातगोडा दुख्ने समस्या आउन सक्छ । यस्तो समस्यालाई मेडिकलमा ‘ग्रोइङ पेन’(बढ्दो उमेरको समस्या) भनिन्छ । बच्चामा यो समस्या देखिनुको कारण हो, शरीरमा क्याल्सियमको कमी । बच्चा बढ्दै जाँदा उनीहरुलाई आवश्यक क्याल्सियमको कमीले जोर्नी तथा हड्डी दुख्ने समस्या निम्तिन्छ ।
बढी चुलबुले बच्चामा समस्या बढी हुन्छ किनभने धेरै खेल्ने बच्चालाई क्याल्सियमको मात्रा बढी चाहिन्छ । उमेरअनुसार शारीरिक विकास हुन त्यसैअनुसारको क्याल्सियम शरीरले पाउनुपर्छ ।
यो अवस्थामा गडबडी हुँदा बच्चाको हाडजोर्नी दुख्छ । खानपानमा विशेष ध्यान दिएर बच्चालाई क्याल्सियम पूर्ति गराउनुपर्छ । हरेक दिन बच्चालाई सामान्य मालिस गर्दा पनि दुखाइमा धेरै राहत मिल्छ ।